Hindiya: Taranjit Singh Sandhu waxay u badan tahay inuu noqon doono ergeyga Mareykanka ee soo socda | Wararka Hindiya - TELES RELAY
Hindiya: Taranjit Singh Sandhu waxay u badan tahay inuu noqon doono ergeyga Mareykanka ee soo socda | Wararka Hindiya
NEW DELHI: Xukuumadda Modi waxay u badan tahay inay soo dirto Taranjit Singh Sandhu isagoo ah safiirka xiga ee Mareykanka. Xilligaan ah wakiilka sare ee Sri Lanka, Sandhu wuxuu u badan yahay inuu ku guuleysan doono Harsh Vardhan Shringla oo hadda ku soo noqday New Delhi si uu ugu guuleysto Vijay Gokhale oo ah xoghaye dibadeed. Gokhale ayaa howlgab noqday dhamaadka Janaayo.
Jawed Ashraf, Wakiilka Sare ee India ee Singapore, wuxuu kala wareegi doonaa Vinay Kwatra Safiirka France usbuucyada soo socda. Kwatra wuxuu u safri doonaa Nepal si uu ula wareego Manjeev Singh Puri oo hada howl gab noqday. Ashraf wuxuu daryeeli doonaa howl muhiim ah maadaama Faransiisku uu noqday mid ka mid ah iskaashiga ugu muhiimsan Hindiya ee adduunka.
Sandhu wuxuu ahaa Kuxigeenka Chef de Mission ee Washington DC intii u dhaxeysay 2013 iyo 2017. Wuxuu ka soo shaqeeyay Howlgalka Indian ee DC intii u dhaxeysay 1997-2000 waxaana guud ahaan loo arkaa inuu yahay weji caan ka ah goobalada Washington DC.
Magacaabista Sandhu waxay u egtahay mid muhiim ah marka loo fiiriyo suurtagalnimada in Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay u badan tahay inuu u safro Hindiya booqasho iskiis ah oo loogu talagalay dhamaadka Febraayo. Booqashada ayaa wali lagu sifeeyay mid kumeelgaar ah maxaa yeelay waa inay tixgelisaa jadwalka xil ka qaadista Trump - Maxkamadeynta Trump ee xil ka qaadista waxay u guurtay Senate-ka Mareykanka, kadib markii loo gudbiyay Aqalka Wakiilada.
Gopal Baglay, oo hadda ku sugan xafiiska Ra'iisul Wasaaraha, ayaa la filayaa inuu ku guuleysto Sandhu sida loo diray Colombo. Sida sanadka cusub u furmayo, MEA waxay u badan tahay inay wejigeeda beddesho qaar ka mid ah hawlgallada muhiimka ah ee adduunka.
Switzerland: Socodka haweenka ee Switzerland iyo adduunka oo dhan inkastoo ...
Beljamka: Coronavirus ee Beljamka: 169 xaaladood ayaa lagu cadeeyay Beljamka
Hindiya: Iltija Mufti ayaa sheegtay in dowladdu ay ka baqeyso haweenka oo uu ...
Meghan iyo Harry: Dadka Kanada ma biilinayaan biilka nabadgelyadooda darteed? - VIDEO
Amiir William wuxuu ku soo laabanayaa xafiiska boqornimada kadib dhererkii qalalaasaha Harry iyo Meghan
Switzerland: Socdaallada haweenka ee Switzerland iyo adduunka oo dhan in kasta oo loo yaqaan 'Covid-19'
Hindiya: Iltija Mufti waxay sheegtay in dowladdu ay ka cabsaneyso haweenka oo ay ka codsaneyso inay ...
Morocco: Morocco: geerida naxdinta leh ee ku timid dalxiis Faransiis ah